I-China Carbide Rotary Burr SM Shape -Icone Shape abavelisi kunye nabathengisi | Xinhua
I-Carbide Rotary Burr Cone Shape Shape, i-SM yemilo ye-burr sisixhobo esisebenzayo sokuqonda ukusetyenziswa koomatshini ekusebenzeni ngesandla. Inobomi benkonzo ende kunye noluhlu olubanzi lwesicelo. Ngomthi onzima, sebenzisa isantya esiphezulu; Kwinyithi, sebenzisa isantya esicothayo; Kwiiplastikhi, sebenzisa isantya esicothayo ukuthintela ukunyibilika kwindawo yoqhakamshelwano, ubukhulu becala isetyenziselwa izixhobo zomoya okanye zombane.
* Ukubanakho kokuchwetheza ingxubevange yesinyithi (kubandakanywa nokucinywa kwesinyithi) kunye nezinto ezingezizo zesinyithi ezinjengeemabhile, ijeyidi kunye nethambo. Ngokuqina ukuya kwi-HRC70,.
* Ukutshintsha ivili lokuguba elincinci kwindawo ezininzi, akukho kungcoliseka kothuli kuvelisiweyo.,
* Umgangatho olungileyo wokugaya kunye nokuguda okuphezulu kufanelekile ukwenza umngxunya kwisakhelo ezahlukeneyo ngokuchaneka okuphezulu;
* Inkonzo yobomi obude, amaxesha ali-10 izixhobo zesantya esiphakamileyo kunye namaxesha angama-200 kwevili elincinci lokusila okuzinzileyo.
* Kulula ukuphatha nokusebenza. Ikhuselekile kwaye ithembekile, iyakwazi ukunciphisa amandla abasebenzi kunye nokuphucula imeko yokusebenza;
* Isibonelelo sezoqoqosho esiphakamileyo, sinokunciphisa nge-10% kwiindleko zenkqubo yokuhambelana.
Ngokwesiqhelo, isantya sokujikeleza kwezixhobo zombane okanye zomoya kufuneka zibe ngama-6000-50000 ngomzuzu.
Ukusetyenziswa okukhuselekileyo, i-carbide rotary burrs kufuneka icinezelwe ngokuchanekileyo ngexesha lokusebenza, ukunqanda ukondla okuphindayo, ukubuyisela umva kokugaya kulunge ngakumbi. Ukukhusela amehlo akho ngemiboniso ekhuselayo kunye nokuthintela i-chip ukuba itshabalale ngaxeshanye.
Uhlobo Cone Imilo M I-M0313X03-25 3 13 3 38 X
Egqithileyo Ikhabhayithi yokuKhanya ngokuKhanya kweCarbide -Imilo yeTape eneRadius
Okulandelayo: Indawo engenanto yeCarbide yeCarbide Rotary Burr
Ikhabhayithi I-Rotary Burr SE Imilo-yeOval Shape